RMC Industrial CORPORATION bụ ọkachamara nnukwu-ọnụ ọgụgụ emeputa niile ụdị ígwè wiil na aluminum alloy wiil, tụnyere mmepe na mmepụta ọnụ. Anyị isi ngwaahịa na-agụnye ígwè na-abụghị beadlock wiil, ígwè beadlock wiil na-abụghị beadlock aluminum alloy wiil na beadlock aluminum alloy wiil na taya, nwekwara anyị nwere ike inye ọtụtụ akụkụ na ngwa maka dị iche iche ugbo ala.
Anyị ụlọ ọrụ e guzobere na 2008, tupu ụlọ ọrụ ike anyị na-ama nwere ọtụtụ afọ nke akụkọ ihe mere eme na wiil na taya ụlọ ọrụ. Emi odude ke Ningbo City nso Shanghai, anyị na-enwe adaba mmiri, ala na ikuku njem.
Anyị ụlọ ọrụ ndị ọrụ niile dị obere na site ná mgbalị nke anyị dum na-arụ ọrụ, RMC ndị nọgidere na-agbalị ka mma ngwaahịa mma, na nọgidere na-agbalị ka mma anyị ụlọ ọrụ hapụụrụ ụkpụrụ na nkà na ụzụ echiche. Anyị kwa afọ ike bụ 2 nde wiil.
Ugbu a, RMC na-ama exported ka America, France, Australia, Italy na 20 na mba ndị ọzọ na mpaghara, nakwa dị, RMC enye anyị gbanwetụrụ echiche maka ndị ahịa anyị na China. Anyị ụlọ ọrụ ka mgbe lekwasịrị anya nnyocha, mmepe na ọhụrụ, na mepụtara ọtụtụ ọhụrụ abụọ beadlock wheel nke ugbua zukọtara na ahịa anyị ụgbọala Nissan Y60, Tundra, Jeep, Raptor, Jimny, Prado na na, na i nwere ike ịhụ nke a ụgbọala anyị gallery. Na anyị na ngwaahịa mere site anyị imewe ìgwè, anyị nọgidere na-eme ka ọtụtụ ndị ọzọ imewe izute ahịa 'na-achọ.
RMC ga-ebute nke abụọ na-adọ anyị atụmatụ mmepe. Anyị ụlọ ọrụ ndị na "ezi uche ahịa, oru oma mmepụta oge na mma mgbe-sales ọrụ" dị ka anyị echiche. Anyị na-atụ na-arụkọ ọrụ na ahịa maka ibe mmepe na uru. Anyị n'anabata pụrụ buyers ịkpọtụrụ anyị.